A chụpụrụ ọdụ ụgbọ oloko Paris Gare du Nord n'ihi iyi egwu bọmbụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » A chụpụrụ ọdụ ụgbọ oloko Paris Gare du Nord n'ihi iyi egwu bọmbụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • News • ndị mmadụ • Rail njem • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
A chụpụrụ ọdụ ụgbọ oloko Paris Gare du Nord n'ihi iyi egwu bọmbụ.
Ọdụ ụgbọ mmiri, otu n'ime Paris kacha ukwuu, na-enwetakwa ụgbọ oloko Eurostar si London ma na-eje ozi n'ọdụ ụgbọ elu Charles de Gaulle.
Gare du Nord nwere ọdụ ụgbọ oloko agbapụlarị n'ihi akpa anaghị ele ya anya.
Ọtụtụ narị ndị njem kwesịrị ichere n'èzí ọdụ ụgbọ mmiri na Wednesde ka ndị uwe ojii nyere iwu ka chụpụ ya.
Ndị otu metro Paris kwuru na a na-atụ anya na okporo ụzọ ga-amalite n'elekere ise nke ehihie (5pm GMT).
A manyere ọtụtụ narị mmadụ ichere n'èzí Gare du Nord ọdụ ụgbọ oloko na etiti Paris taa ka ndị uwe ojii nyere iwu ka a chụpụ ya, ebe ndị otu ogbunigwe na-enyocha ihe e chere na ọ bụ akpa na-anaghị ele ya anya.
The Gare du Nord, nke gọọmentị Paris-Nord, otu n'ime ọdụ ọdụ ụgbọ oloko isi isii dị na Paris, a chụpụrụ n'ihi ihe egwu bọmbụ nwere ike ime ma kwụsịtụ ụgbọ okporo ígwè si n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
Transport Express Regional (TER) tweeted na akwụsịla ụgbọ njem site na ọdụ ụgbọ mmiri, ebe ụlọ ọrụ na-agba Paris Metro kwuru na ụgbọ oloko anaghị agba n'akụkụ ọ bụla n'etiti Paris Gare de Lyon na Paris Nord.
Ndị otu metro Paris kwuru na a na-atụ anya na okporo ụzọ ga-amaliteghachi n'elekere ise nke ehihie (5pm GMT) wee kwenye na ihe ahụ merenụ metụtara otu ihe na-adịghị ele anya.
Ụlọ ọrụ ahụ, otu n'ime ParisNke kasị ukwuu, na-enwetakwa ụgbọ oloko Eurostar si London ma na-eje ozi n'ọdụ ụgbọ elu Charles de Gaulle.
Foto na ihe onyonyo sitere na mpụga ọdụ ụgbọ oloko ahụ na-egosi nnukwu igwe mmadụ na-eche n'okporo ụzọ nke 10th arrondissement nke Paris maka ihe doro anya. Ụfọdụ ndị nọ na Twitter kwuputara na ndị otu ogbunigwe rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.